Mampiasa aloe vera - Ny tombony rehetra ho an'ny vatantsika | Bezzia
Susana godoy | 21/07/2021 12:00 | beauty
Hainao ve ny mampiasa aloe vera? Eny, marina fa miatrika hatsaran-tarehy iray amin'ireo zavamaniry kintana isika ary tsy ho an'ny kely kokoa. Saingy androany dia tsy maintsy manoratra fampiasana maro hafa mila fantatrao ianao. Satria tsy ny hatsarana ihany no hahazo tombony amin'izy ireo fa misy hafa tokony ho fantatrao.
Noho izany, rehefa milaza isika fa mifandray amin'ny iray amin'ireo zavamaniry manokana indrindra dia tena marina izany. SATRIA manana fampiasana maro, na dia marina aza fa ny sasany ho fantatra kokoa noho ny hafa. Izany no antony ilantsika mankafy ny zavatra rehetra atolotray antsika, izay tsy kely. Te hahalala ve ianao izao?
1 Aloe vera amin'ny hatsarana
2 Fomba fampiasana aloe vera manohitra ny tsy fihinanan-kanina
3 Mampihena ny fivontosana avy amin'ny tsiranoka
4 Mampihena takela-by
5 Veloma tongotra reraka
6 Avelao any aoriana ny famantarana ny fahanterana
Aloe vera amin'ny hatsarana
Angamba tontolon'ny hatsarana izay ahitantsika fampiasana bebe kokoa noho ny hatramin'izay ho an'ny aloe vera. Satria saika hanao izay tianao rehetra ary bebe kokoa aza. Tsy mino an'izany ianao? Ankehitriny dia lazainay aminao ny fampiasana indrindra ny vokatra toy izao.
Hydration ambony indrindra amin'ny hoditrao: Mila milamina ny hoditra fa tsy tery, ka ny vokatra toy izao dia hanome azy io hydration rehetra azo atao.
Ho an'ny fanadiovana tarehy Tonga lafatra koa izy io satria ho lalina ny fanadiovana fa hamandoana ny hoditra koa.
Ny fanalefahana ny hoditra dia zava-dehibe fa ny an'ny volo koa. Noho izany, miloka amin'ny fametrahana kely ity gel ity amin'ny volo isika ary avelao hipetraka mandritra ny minitra vitsy ary avy eo dia jereo ny fahalemen'ny nofo. Fa miady amin'ny dandruff koa io.
Raha manana ny molotra maina, tsy maintsy kosehinao kely ny pulpany dia hahazo vokatra tsara ianao.
Mba hampihenana ny marika mihinjitra dia mila manotra moramora ilay faritra ianao mba hamerenana amin'ny laoniny ny hoditra.
Fomba fampiasana aloe vera manohitra ny tsy fihinanan-kanina
Al manana fananana manohitra ny mamaivay sy manadioHo tonga lafatra koa izy io raha oharina amin'ny tsy fihinanan-kanina. Tsy maintsy raisinao amin'ny antonony foana izany, fa raha afangaro aloe vera 500 grama, miaraka amin'ny kôkômbra kely, ny ranom-boasarimakirana iray ary persily iray kesy, dia hanana fitambarana tonga lafatra ianao mba hahatsapanao fa maivana kokoa ny kibonao.
Mampihena ny fivontosana avy amin'ny tsiranoka
Marina izany rehefa manana aretina na tsiranoka isika, tsy maintsy manatona ny dokotera isika. Fa ankoatr'izay dia tsy maintsy fantatrao fa ny aloe vera koa dia iray amin'ireo singa fototra hiadiana amin'ity olana ity. Satria anti-milaza zavatra izy io. Azonao atao ny manotra na mampihatra vokatra kely ary fehezo ny faritra mba hahatsara kokoa ny vokatra tadiavina. Efa nanandrana ve ianao?
Raha misy karazana areti-mifindra eo am-bavanao, avy eo ianao dia afaka mampiasa aloe vera hiadiana aminy. Satria miresaka aretina indray isika ary hokarakaraina sy hositranina miaraka amin'ny aloe vera ary koa rano. Afangaroy tsara ny zava-drehetra ary tsy maintsy kobanina miaraka amin'io fitambarana io. Ho hitanao fa, ankoatry ny fampihenana ny takelaka nify, dia hanao veloma ny aretina mety ho azon'ny vavanao ianao. Raha ny tena izy, ity rinse ity dia tsara ihany koa raha tsy mifoka rivotra.
Veloma tongotra reraka
ny tongotra reraka Izy ireo koa dia hahatsapa ho ampitahaina amin'ny fanorana miaraka amin'ny mpiorina kintana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy apetrakao ao anaty vata fampangatsiahana aloha izany, avy eo, hosotrainao ilay faritra marary rehetra. Andramo atao fanorana malefaka nefa miadana ilay izy mba hampihetsika ny fivezivezena arak'izay ilaintsika.
Avelao any aoriana ny famantarana ny fahanterana
Miverina amin'ny fikolokoloana ny hoditra isika fa ny fotoana dia mitaky izany. Satria amin'ity tranga ity, ny ketrona voalohany dia hanome lalana ny hafa lalindalina kokoa rehefa ela. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina fatratra foana isika mba hiezahana hampiato, araka izay tratra, io fahanterana io. Noho izany, ny fanorana miaraka amin'ity gel ity dia mampihetsika ny famokarana collagen ary ny vokatra dia ho lasa malama hoditra. Efa nanandrana ny iray amin'ireto tetika ireto ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fomba fampiasana aloe vera